Концепцию развития овощеводства утвердили в Хабаровском крае — Картофельная Система
Fikradda horumarinta khudaarta ayaa lagu ansixiyay Territor Khabarovsk
Dhulka Khabarovsk, waxay qaateen fikradda ah kobcinta khudradda iyo korodhista baradho, kuwaas oo isku daraya dhammaan noocyada taageerada aaggan. Waxaan ka hadleynaa kabidda abuuridda, iibsashada abuurka miraha, helitaanka mashiinnada beeraha, u-ku-biirinta dhul-beereed dheeri ah wareejinta, abuurista kaydka khudradda, iyo bixinta deeqaha lagu koriyo ee beeraleyda.
Shaqada ka dib, dhul beereedka ay beeraleen beeraleyda iyo ururada beeraha sanadka 2020 wuxuu noqon doonaa 650 hektar, taasoo 8% ka badan tan sanadka 2019. Khudaarta la filayo inay noqoto 9,7 kun oo tan. Sida laga soo xigtay saadaasha wasaarada, mugga la filayo ee soosaarka baradhada ee ururadaan dhamaadka 2020 wuxuu noqon doonaa 11,4 kun oo tan, taas oo xiri doonta baahida bulshada gobolka ee baradhada 28,7%, ”wasaarada beeraha ayaa tiri.
Baloog gaar ah ayaa ah horumarka khudradda cagaaran. Hada deegaanka lagu koriyo jiilaalka ee gobolka waa 7,4 hektar, baahida guudna waa 37 hektar.
Waxaan wadnaa afar mashruuc oo maal gashi ah. Kordhinta aagagga ka hooseeya aqalka dhirta lagu koriyo ee 2020 - 2021 waxay noqon doontaa 5,1 hektar. Isugeynta bedka lagu koriyo xilliga qaboobaha ee 2021 ayaa kor u kici doona 12,5 hektar, iyo wadarta guud ee la qorsheeyay ee soosaarka khudradda gudaha 2021 waxay sare u kici doontaa 2019% marka loo eego sanadka 25 si ay u gaarto 6,5 kun oo tan. Sidaa darteed, waxaan kor u qaadidoonaa isku filnaanshaha khudaarta ilaa 33%, ”ayuu yiri Olga Kravchuk, Wasiir kuxigeenka Kowaad ee dhaqaalaha.
Fikradda ayaa loo qorsheeyay tilmaamayaasha mustaqbalka. Marka, marka la gaaro 2024, wadarta guud ee lagu koriyo xilliga qaboobaha ee gobolka waa inay ahaataa 20,8 hektar. Guud ahaan, ujeedka ugu weyn ee fikirka ayaa ah in la kordhiyo isku filnaanshaha gobolka by khudaarta ilaa 2025% marka la gaaro 40, iyo baradhada - ilaa 80%, warbixinada Gubernia Portal, ayagoo tixraacaya howlaha saxaafadda ee dowlad goboleedka Khabarovsk Territory.
Source: Gubernia khadka tooska ah
Tags: khudradda kobcayaGobolka Khabarovsk
Beerista dhulbeereedka ayaa ku tiirsaneyd beeraleyda Tyumen
“KOOBAHA KAADHKA BIYAHA IYO CUDURKA CUDURKA”: CORONAVIRUS SIYAASI AH INUU KU SAMEEYO DHAQAALAHA EU
Dhulka Khabarovsk, dawladaha hoose waxay ku qasbeen inay kabaarsadaan gaarsiinta woqooyiga.
Waxaan u soo jeedinayaa soosaarayaasha baradhada, karootada, xididdo, kaabash iyo basasha!
Diyaargarowga Maalinta Goobta ayaa ka sii socda Gobolka Bryansk
Dadka deggan Sakhalin ayaa isku dayi doona goosashada ugu horreysa ee baradho da 'yarta ah bisha Luulyo
Markii ugu horreysay, baradhada ka timid Faransiiska ayaa loo keenay Ukraine - sababta iyo waxa laga diyaarin karo